Fiber Amplifier ထိနျးသိမျး 1.0um အမြင့်ပါဝါလူပျိုကြိမ်နှုန်း Polarized - တရုတ် Connet လေဆာနည်းပညာ
LIDAR များအတွက်လေဆာနဲ့ Amplifier
ဆိုနိုင်ပါတယ် LIDAR များအတွက်လေဆာနဲ့ Amplifier
LIDAR များအတွက် Nanosecond က Short Pulse Fiber လေဆာ
လူပျိုကြိမ်နှုန်း Fiber လေဆာ
optimized Ring ကိုခေါင်းပေါက် SF Fiber လေဆာ (CoSF-R)
လူပျိုကြိမ်နှုန်း Semiconductor လေဆာ
Pulse Fiber လေဆာ
0.5um Pulse Fiber လေဆာ
1.0um Pulse Fiber လေဆာ
1.5um Pulse Fiber လေဆာ
2.0um Pulse Fiber လေဆာ
CW Fiber လေဆာ
0.5um CW Fiber လေဆာ
1.0um CW Fiber လေဆာ
1.5um CW Fiber လေဆာ
2.0um CW Fiber လေဆာ
1.0um Pulse Fiber Amplifier
1.5um Pulse Fiber Amplifier
2.0um Pulse Fiber Amplifier
ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်
လူပျိုကြိမ်နှုန်း Semiconductor လေဆာရင်းမြစ်
စွတ်ဖားစီးခြင်း Broadband အလင်းရင်းမြစ်
component နှင့် Subassembly
ဖျူး Pump & Signal ပေါင်းစပ်
မြင့်မားသောပါဝါ Fiber စိတျအပိုငျး
ညနေ Coupler Module
ညနေ Fiber Patchcord
မြင့်မားသောပါဝါ Fiber လေဆာနဲ့ Amplifier
CoLID စီးရီး LiDAR ဘို့က Short Pulse Fiber လေဆာ 1064nm
LiDAR ဘို့က Short Pulse Fiber လေဆာ 1064nm
CoLID စီးရီး LiDAR ဘို့က Short Pulse Fiber လေဆာ 1550nm
Long က Pulse 1550nm လူပျိုကြိမ်နှုန်း pm တွင် Fiber Amplifier
Fiber Amplifier ထိနျးသိမျး 1.0um အမြင့်ပါဝါလူပျိုကြိမ်နှုန်း Polarized
kHz ကျဉ်းမြောင်း linewidth optical signal ကိုများအတွက်
output power 100W အထိရှိနိုင်ပါသည်
အနိမျ့ဆူညံသံ Multi-ဇာတ်စင်ဖိုင်ဘာချဲ့စက်များ cascaded
စံခဲ-အချိန်: ပုံမှန်အားဖြင့် 2-4 ပတ်ကြာ
စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို: FOB ရှန်ဟိုင်း
ထုတ်လုပ်သူ: Connet လေဆာနည်းပညာ
စိတ်ကြိုက်ပက်ကေ့ / Size: ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
More Information ကို: ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
Connet လေဆာနည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Connet လေဆာ၏ဖိုင်ဘာချဲ့စက်များထိန်းသိမ်းခြင်းအဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်စီးရီးမြင့်မားသောပါဝါတစ်ခုတည်းအကြိမ်ရေ polarization ကို DFB သို့မဟုတ် DBR ၏နိယာမအပေါ်အခြေခံအထူးသထိုကဲ့သို့သောဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်အဖြစ် ultra-ကျဉ်းမြောင်း linewidth တစ်ခုတည်းအကြိမ်ရေလေဆာသတင်းရင်းမြစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အသံချဲ့စက်၏ဤကြင်နာ 50W output power ကိုမှ kHz ပြင်းအားအထိမှာအနိမ့်ပါဝါကို optical signal ကိုတိုးမြှင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိပြီးတဆက်တည်းမှာပင် input ကို signal ကို၏ရောင်စဉ်တန်းအိမ်ခြံမြေထိန်းသိမ်း။ အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်စီးရီးအသံချဲ့စက်မြင့်ပါဝါကိုအသုံးပြုသည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Multi-mode ကိုစုပ်စက်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှစ်ချက်ဝတ်ဖိုင်ဘာ amplification ၏နည်းပညာန်ထမ်းများနှင့်အားလုံး polarization ကို-ထိန်းသိမ်းခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ output power ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်စီးရီးဖိုင်ဘာအသံချဲ့စက်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့အတွင်းရှိမိုက်ခရိုနှင့်အတူအရေးပါသောပြန်လာ-Key ကိုစနစ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ panel ကို LCD ကိုပါဝါ၏ပြည်နယ်နှင့် output power ကိုချိန်ညှိဖို့ဖုဖော်ပြရန်ငှါ, လေဆာရောင်ခြည်ကိုစတင်ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
နှစ်ဆဝတ်ဖိုင်ဘာကိုင်တွယ်အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Connet လေဆာမြင့်မားပါဝါ polarization ကိုအဆိုပါဖိုက်ဘာ၏ nonlinear သက်ရောက်မှုနှိပ်ကွပ်နေစဉ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် output ကိုရရှိအရှင်, ဖိုင်ဘာချဲ့စက်များထိန်းသိမ်းပေးဖို့သင့်လျော်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုကျင်းပ။ အဆိုပါထူးခြားတဲ့အပူကုသမှုနည်းပညာ benchtop ဖိုင်ဘာအသံချဲ့စက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ stably operated နိုင်ပါတယ်အာမခံပါသည်။ ဒါဟာတပြင်လုံးကိုစနစ်၏ဘေးကင်းမှုသေချာစေရန်ကျသွားသည့် input ကို signal ကိုချွတ်ပယ်၏အမှု၌မြင့်ပါဝါစုပ်စက်၏စစ်ဆင်ရေးခုတ်လှဲနိုင်အောင်အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်တုန့်ပြန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး circuit ကိုအလိုအလျှောက် input ကိုနှင့် output ကို signal ကို၏တန်ခိုးစောင့်ကြည့်။
Connet လေဆာ၏အင်္ဂါဂြိုဟ်စီးရီးမြင့်သောအာဏာကို benchtop polarization ကို-ထိန်းသိမ်းခြင်းဖိုင်ဘာချဲ့စက်များကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနဆိုနိုင်ပါတယ်ရောင်ခြည်ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်ထောက်လှမ်း sensing စနစ်, တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
•အမြင့်အထွတ်အထိပ် output power ကို: 0.5W ~ 50W
•စုစုပေါင်း pm တွင်ဖိုင်ဘာဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မား PER
• Atom ထောင်ချောက်
အပိုင်း NO ။
operating လှိုင်းအလျား 1
input ပါဝါ 2
output power tunable အကွာအဝေး
polarization Extinction အချိုး (PER)
output power တည်ငြိမ်မှု 4(8h)
M က 2
က output ဖိုင်ဘာ၏အရှည်
FC အသင်း / APC ရရှိနိုင် ((အခြားရွေးချယ်စရာ)
0 င် ~ + 35
1. ပုံမှန်လည်ပတ်မှုလှိုင်းအလျား: 1053nm, 1064nm, 1083nm;
2. ပုံမှန် output power: 1W, 5W, 10W, 20W,
3. ထို output power ကိုတည်ငြိမ်မှုမိနစ် 30 '' နွေး-up, နောက်, 25 ℃အောက်တွင်တိုင်းတာသည်။
MFAP-Yb-10xx-B-PW-SF: pm တွင်
10xx: Operating nm အတွက်လှိုင်းအလျား, ဥပမာ: 1053nm, 1064nm, 1083nm
B က: B-Benchtop
PW: W က, ဥပမာအတွက် output power: 0.5-0.5W, 1-1W, 10-10W
ယခင်: 2.0um Pulse Fiber Amplifier
နောက်တစ်ခု: L-တီးဝိုင်း Optical Fiber Amplifier
Connet လေဆာနည်းပညာ Co. , Ltd မှလေဆာအရင်းအမြစ်, ဖိုင်ဘာလေဆာ, optical fiber ကိုအသံချဲ့စက်နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး high-tech စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ချက်ဝတ် Fiber Amplifier
အမြင့်ပါဝါလူပျိုကြိမ်နှုန်း Fiber အသံချဲ့စက်
အမြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Fiber Amplifier
KW အမြင့်ပါဝါ Fiber အသံချဲ့စက်
KW ချုံ့ရန် Linewidth Fiber အသံချဲ့စက်
Long က Pulse လူပျိုကြိမ်နှုန်း pm Fiber အသံချဲ့စက်
ချုံ့ရန် Linewidth Fi ကို ber Amplifier
non-PM Fiber အသံချဲ့စက်
လူပျိုကြိမ်နှုန်း pm Fiber အသံချဲ့စက်
Tm သည် Doped Fiber Amplifier
ရှန်ဟိုင်း 200240, တရုတ် 322, အမှတ် 953 Jianchuan လမ်း, Minhang တည်ဆောက်ခြင်း3/ က F,